Pantheon: Yakakomba WordPress kana Drupal Kubata neNew Relic | Martech Zone
China, June 23, 2016 Douglas Karr
Tine 47 anoshanda plugins pane yedu WordPress kuisirwa. Ndiwo akawanda plugins, mazhinji acho anogona kudzora mashandiro eWordPress. Isu tinoita imwe yakazara yekumhanyisa bvunzo tisati taisa plugins, kana isu tinogona kutoshandisa imwe yemafungiro kungo gadziridza dingindira redu kuti imhanye nekukurumidza uye ishoma kubhadharisa pamaseva edu. Kumhanya kwakakosha mazuva ano - zvese kubva kumushandisi ruzivo kona uye yekutsvagisa optimization angle.
Dai ndanga ndine chero chichemo pamusoro pezvakajairika kugadzira mapuratifomu, ndezvekuti ivo kazhinji havatenderi iwe kuti utambure uye uone mibvunzo nemidziyo uye maitiro avanokanganisa yako yemukati manejimendi system. Chinhu chakareruka sekugadzirisa dhatabhesi rako chinogona kutema nguva inotora mapeji ako kurodha nechidimbu. Pantheon iri kuchinja izvi!
Pantheon ipuratifomu yekumusoro-yekumisikidza yeiyo yakakomba WordPress uye Drupal mushambadzi. Pantheon inopa webhu zvikwata zvese zvekuvandudza maturusi, kubata, kuwedzera, mashandiro, kufambiswa kwebasa, uye otomatiki ivo vanofanirwa kuvaka iwo akanakisa mawebhusaiti pasi.
Manage Sites Nyore - Manage ako ese WordPress uye Drupal masaiti kubva kune rimwe chete dhibhodhi. Shandira pamwe pamapurojekiti zviri nyore pakati penhengo dzechikwata.
Shandura DevOps - Zvisunungure pachezvako kubva kuseva kuchengetedza. Rega Pantheon otomatiki sysadmin ishande- iwe unogona kutarisa mukuvandudza makuru mawebhusaiti.
Kufamba kwebasa kweiyo Chokwadi Agile - Push shanduko nekukurumidza uye kazhinji. Shandisa kuenderera mberi kusangana pamwe neshanduro kudzora uye kunze-kwe-kwebhokisi dev, bvunzo, uye rarama nharaunda.
Nesimba rakabatana re Pantheon pamwe neNew Relic Pro, vatengi vedu vane maturusi ekuvaka, kuvhura, uye kumhanyisa anoshamisa mawebhusaiti, nekukurumidza uye nekushushikana-pasina, nekuita kwakanyanya. New Relic Pro inozadzisa zvakakwana kune iyo Pantheon chikuva uye tinofara kupa iyi yakasarudzika, yekupedzisira-kumagumo webhu kuvandudza uye analytics suite pasina mari yekuwedzera kune vashandisi vePantheon. Zack Rosen, Co-muvambi uye CEO wePantheon
Vashandisi vePantheon ikozvino vanogona kuona kwakawanda webhusaiti mashandiro panguva dzese nhanho dzezvigadzirwa - kubva mukusimudzira kusvika pakurarama kushambadzira. Kushanda kwakakosha kunosanganisira:
Kodhi-chikamu chinoonekwa inopa vashandisi simba rekuziva iro rinokonzeresa nyaya dzekuita, kudzika kune iro basa rekufona, kuti inyatso kuongororwa uye kugadzirisa matambudziko.
Kutumirwa mureza inobvumira vanogadzira kuti vatarise mashandiro nekufamba kwenguva uye nekukurumidza kuti vaone zvinonetsa mamiriro
Kuwanika kweNew Relic pane yega nzvimbo yekusimudzira - Mamiriro ezvinhu eMultidev, Dev, Bvunzo, uye Rarama- zvinoita kuti vashandisi vakwanise kubata nyaya dzekuita vasati vaenda kunorarama uye nekuendesa nechivimbo.
Vashandisi vePantheon vanogashira mukana weNew Relic APM Pro nekukasira uye vanogona kuwana saiti kuita analytics mune iyo dashboard yePatheon chikuva.
Tags: Agilekodhi kutumirwadrupalDrupal kusimudziraNew Relicnyowani relic propantheonwebhusaiti manejimendiWordPressWordpress kuvandudzawordpress hostingWordpress kuita
Kubatana Kushambadzira uye KUNA-SPAM Kuteerera